NY FINOANA SY NY FITADIAVANA FAMANTARANA.
TORITENYPosté par Ra-Hiandry lun., avril 16, 2012 21:33:30
― Ny finoana sy ny fitadiavana famantarana.
“Fa hoy izy tamin'ireo: Raha tsy hitako ao amin'ny tànany ny loaky ny fantsika ka atsofoko eo amin'ny loaky ny fantsika ny rantsan-tànako, ary atehiko amin'ny lanivoany ny tànako, dia tsy hino aho.”
Na eo amin’ny fiainana andavanandro na amin’ny fiainana ara-panahy, dia tsy i Md Tomà ihany, fa ny olombelona rehetra, dia samy manana io faniriana hitady famantarana io avokoa. Tsy misy amintsika mino avy hatrany izay zavatra ambara azy na henony, fa tsy maintsy “mitady famantarana” aloha, manamarina amin’izay efa hitany na henony, manamarina raha mitombona sy lojika izany na tsia....
Koa tsy hadisoana velively akory ny mitady famantarana amin’i Jesoa raha misy fisalasalàna, fa azontsika atao tsara ny mangataka am-panetrentena, ny famantarana amin’i Jesoa hoe: asehoy raha tena izany no sitrakao!
Izany rahateo no nataon’i Jesoa eto: “Ho aminareo anie ny fiadanana! Nony efa nilaza izany izy, dia nasehony azy ireo ny tànany sy ny lanivoany, ka faly ny mpianatra fa nahita ny Tompo.” Nasehony azy ny tànany sy ny lanivoany: izany hoe nanehoany famantarana ireo mpianatra, izay mety ho nisalasala sy nieritreritra hoe inona no famantarana fa tena i Jesoa ity, ka faly izy ireo.
Ka inona àry no mahatonga an’i Md Tomà hataon’i Jesoa hoe: “Aza malain-kino?”. Tsotra ny antony: satria ny an’i Md Tomà dia tafahoatra loatra ny fitadiavana famantarana. Ny an’ny mpianatra ampy ny mahita hoe: misy fery sy loaka ny lanivoa sy ny tanana, na ny tongotr’i Jesoa. Ny an’i Tomà mbola ampiany hoe (na hitako aza ireo dia mbola mila) hataoko ao sy atehiko eo ny tanako (sao angamba fanova-maso fotsiny izany sanatria?). Ary angamba aza, raha mbola nisy famantarana na zavatra hafa mbola azo porofoina, dia mety ho mbola niampy ireo.
Fa tsy mampaninona an’i Jesoa anefa izay fomba hinoantsika sy hahazoantsika ny finoana, fa ny zavadehibe aminy dia ny hoe mino Azy tanteraka isika. Ka dia narahin’i Jesoa sy notoaviny ny fanirian’i Md Tomà liam-pamantarana. Marina fa sambatra, ary tsara kokoa raha tsy mitady famantarana isika, fa avy hatrany dia mino izay ambarany. Fa rehefa tena tsy vitantsika moa, fa misy ny fisalasalàna, dia angataho am-panetrentena izay famantarana tiantsika ho azo. Ny tsy mety fotsiny dia ny mitady famantarana tafahoatra.
Ho an’ny mpino, dia ampy azy ny mahita famantarana iray. Izay malain-kino kosa, dia mitaky sy mitady famantarana amin’ny zavatra rehetra sy isaky ny mihetsika.
― Famintinana: Ny Fanahy Masina no mampiombona sy manome fiadanana ho antsika mba hahafantarantsika ny sitrak’i Jesoa, sy handraisantsika ary hiainantsika tsara ny fahasoavana rehetra avy amin’ny fitsanganan-ko velona. Izy no mandavorary ny fiombonantsika rehefa samy mifamela tanteraka isika samy isika, ka mijoro tsara amin’ny finoana mafy orina, mandresy ny tahotra sy izay fitsapana mbola ho avy rehetra.
Ho tanteraka amintsika anie izany! Amen.